WARBIXIN: Imisa Ayay Kharash Garaysay Kooxaha Reer Yurub ilaa Haatan Suuqa Kala iibsiga – Kooxda.com
Home 2017 August France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Suuqa, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Imisa Ayay Kharash Garaysay Kooxaha Reer Yurub ilaa Haatan Suuqa Kala iibsiga
WARBIXIN: Imisa Ayay Kharash Garaysay Kooxaha Reer Yurub ilaa Haatan Suuqa Kala iibsiga
August 10, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Kooxaha yurub oo dhan ayaa ku kala dheeraynayay suuqa kala iibsiga xagaagan si ay u xoojiyaan kooxohooda ka hor bilaabasha xilli ciyaareedka cusub iyaga oo suuqa galiyay lacag badan, xilli ayna qaar ka mid ah kooxda ayna lacago badan suuqa galin sidii aanu uga baranay ilaa haatan.
Saxiixa ugu weyn ee xagaagan ayaa ah saxiixii uu Neymar ugu biiray kooxda PSG isaga oo ugu biiray lacag dhan 200 oo Milyan laakiin kooxda reer France ayaan ku jirin booska ugu horeeya kooxaha ugu kharash garaynta badan.
Laakiin waxa ay ku dhacaysaa kaalinta labaad iyada oo ka dambaysa kooxda man city oo ilaa haatan suuqa galisay lacag dhan 240 milyan oo euro.
10-kooxood ee lacagat ugu badan ayay ka mid yihiin 4 kooxood oo England ah iyo 4 kale oo Italy ah taas oo cadayn u ah in horyaalka Italy soo celinayo wakhtigiisii fiicnaa.
Dhanka kale kooxaha reer Spain ayaan lacago badan suuqa galin iyada oo ay kooxda Barcelona ku jirto kaalinta 23-aad iyada oo kaiya suuqa galisay lacag dhan 47.5 Milyan euro.
Kooxda Real Madrid ayaa ku soo xigta iyada oo ku jirta kaaliinta 24-aad iyada oo suuqa galisay kaliya lacag dhan 47 milyan oo euro laakiin Barcelona ayaa la filayaa in ay suuqa galiso lacag waali ah labada todobaad ee soo socda.
Dhanka Horyaalka Italy kooxda Ac Milan ayaa xagaagan samaysay suuq waali ah iyada oo kaalinta ugu horaysa kaga jirta dhanka horyaalkeeda iyada oo suuqa galisay lacag dhan 189 milyan euro.
Kooxda Man United ayaa dhanka Premier league sidoo kale suuqa galisay lacag waali ah oo dhan 164 Milyan halka ay chelsea oo ku xigta galisay lacag dhan 140 Milyan euro.
Kaalinta 6-aad ayay nasiib u yeelatay kooxda Juventus oo xagaagan suuqa galisay lacag dhan 122 Milyan euro halka ay Bayern Munich suuqa galisay lacag dhan 100 Milyan oo euro.
Kooxaha Everton,Roma iyo Inter Milan ayaa ku jira kaalmaha 8-aad iyo 10-aad iyada oo laftoodu aan wacdaro yar shidayn iyaga oo kooxohooda si fiican u dhisay.